Ny zava-drehetra momba ny jiro bias - jiro MediaLight Bias
Ny momba ny Jiro Bias rehetra
Manana tabilao habe amin'ny pejin'ny vokatra rehetra izahay, saingy mbola angatahina izahay hanamafy ny habe marina impiry impiry isan'andro. Midika izany fa ny olona dia tsy maintsy tena tsy matoky tena raha mihatra amin'ny ...
Moa ve ny biriky na loko miloko "manimba" jiro mitongilana marina?
Mahazo an'io fanontaniana io matetika isika, ary te hanome fomba fijery kely aho. Voalohany, avelao aho hiteny fotsiny fa raha mandoko horonantsary ianao, dia te hanana fifehezana lehibe indrindra amin'ny tontolo iainana azonao atao. Anisan'izany ny flat-spaly ...
Ny aretin-maso sy ny OLED: Ny marina dia ratsy kokoa noho izany
Inona no fomba tsara hanafoanana ny fihenan'ny mason'ny OLED? Mametraha jiro bias. Raha mpandoko loko na mpamoaka horonantsary matihanina ianao, dia fantatrao fa ny fihenan'ny maso dia mety ho ratsy kokoa amin'ny OLED toy izay amin'ny teknolojia fampisehoana hafa. Fa raha ianao fotsiny ...
MediaLight 6500K Simulated D65: Reference Quality, Jiro D65 Bias voamarina ISF
Ny fametrahana jiro marina ao amin'ny teatra an-tranonao dia tsy voatery ho fanamby fa matetika. Ankoatry ny fantsom-boasary fluorescent, izay fototr'izany nandritra ny taona maro, dia vitsy ny safidy nanolotra ny fenon'ny CIE ...
Ny jiro bias dia loharanom-pahazavana izay miainga avy ao ambadiky ny fampiratiana anao, manatsara ny fahombiazan'ny fahitalavitra na ny monitor anao, amin'ny fanomezana loharano tsy miovaova ho an'ny masonao. (Tsy miresaka jiro LED miloko vaovao izay miresaka ...